14,571,250 unique visits
Read More · 0 Comments · 2425 Reads
Read More · 0 Comments · 41 Reads
Read More · 0 Comments · 2716 Reads
Read More · 0 Comments · 953 Reads
· C/Raxmaan Xoosh Jabriil �Waa lama huraan inuu dagaal ka dhaco Magaalada Kismaayo�
Wasiirkii Dastuurka iyo Arrimaha Federalka ee Xukuumadii hore C/raxmaan Xoosh Jabriil, ayaa wuxuu sheegay inaysan waxaan wanaagsaneyn ka soo muuqanayn Magaalada Kismaayo.
Galkacal on May 22 2013 20:29:24 ·
Read More · 0 Comments · 2165 Reads
· Agaasimihii Nabad Suggida oo markale si kulul u weeraray Madaxweynaha, R. Wasaaraha & Prof. Jawaari
Agaasimihii hore ee Hay�adda Nabad Suggida ee Qaranka Axmed Macalin Fiqi, ayaa wuxuu markii 2-aad uu si kulul uu u dhaleeceeyay hogaanka Dowladda Federalka ee Soomaaliya.
Galkacal on May 22 2013 20:08:44 ·
Read More · 0 Comments · 2714 Reads
· Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Hiiraan oo maanta doortay hogaan cusub, markii la dilay Nabadoon Maracade
Odayaasha Golaha Dhaqanka ee Gobolka Hiiraan ayaa waxay maanta soo doorteen hogaan cusub, wixii ka dambeeyay tan iyo markii 27-kii bishii November ee sanadkii hore la dilay Allaha u naxariistee Sheekh Maxamed Xaaji Xuseen "Maracade".
Shiil on May 22 2013 15:21:05 ·
Read More · 0 Comments · 724 Reads
· Shir lagu taageeraayo Maamulka Axmed Madoobe oo ka dhacay Boosaaso, lagana digay dagaalo Kismaayo ka dhaca
Shir lagu taageeraayo Maamulka Axmed Madoobe, oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka Gobolka Bari, ayaa wuxuu maanta ka dhacay Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Shiil on May 22 2013 14:52:23 ·
Read More · 0 Comments · 923 Reads
· Sarkaal ka tirsan Hay'adda SDR oo maanta lagu dilay Gobolka Mudug
Dilka Sarkaalkaan ayaa wuxuu ka dhacay Deegaanka Ceelhuur ee Gobolka Mudug, waxaana dilkiisa geysatay afar nin, oo mid kamid ah uu rasaas huwiyay.
Shiil on May 22 2013 13:57:19 ·
· DEG DEG: Mooshinkii laga keenay Xukuumada Saacid oo fashilmay
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan "Jawaari", ayaa wuxuu maanta ku dhawaaqay inuu fashilmay mooshinkii laga keenay Raa'isal Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon "Saacid".
New York on May 22 2013 13:09:38 ·
Read More · 0 Comments · 3754 Reads
· Raa'isal Wasaaraha oo la kulmay hogaanka Midowga Afrika ee Soomaaliya "Daawo Sawirada"
Ra�iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa saaka xafiiskiisa ku qaabilay wafti uu hogaaminayo wakiilka midowga Africa ee Soomaaliya Amb. Maxamed Saalax Anaadif iyo xubno ka tirsan saraakiisha sar sare ee Amisom.
New York on May 22 2013 12:58:46 ·
Read More · 0 Comments · 1617 Reads
· Ciidamada Dowladda oo maanta xaalad qal qal leh ka abuuray Degmada Beled Xaawo
Ciidamada Militariga ee Dowladda Soomaaliya ee ku sugan Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo, ayaa waxay maanta xaalad qal qal leh ay ka abuureyn qeybaha kala duwan ee Degmada.
New York on May 22 2013 11:58:09 ·
Read More · 0 Comments · 1776 Reads
· Ethiopia oo cadeysay mowqifkeeda ku aadan xaaladaha Jubbooyinka ka taagan
Iyadoo Dowladaha Kenya iyo Ethiopia si adag loogu tilmaamo faragelin baahsan inay ku hayaan arimaha hada ka taagan Gobalada Jubbooyinka ayaa Dowladda Ethiopia waxa ay ka hadashay arintaasi.
Rashka on May 22 2013 09:52:43 ·
Read More · 0 Comments · 7159 Reads
· Dowladda oo ardayda Soomaaliyeed ka dalbatay inay kusoo biiraan ciidanka xooga dalka
Dowladda Soomaaliya ayaa ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan waxkabarata waxa ay ak dalbatay inay kusoo biiraan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo dib udhis xoog leh iminka uu ku socdo.
Rashka on May 22 2013 09:18:12 ·
Read More · 0 Comments · 1403 Reads
· Baarlamaanka oo miiska usaaran mooshinka Xukuumadda iyo Ra'iisul Wasaaraha oo la filaayo inuu hortago Baarlamaanka
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gudagalaya ka doodista mooshinka laga keenay Xukuumadda Soomaaliya oo muddo shan cisho ka hor loo qeybiyay Xildhibaanada Baarlamaanka.
Rashka on May 22 2013 08:32:58 ·
Read More · 0 Comments · 1216 Reads
· Taliska Amisom oo shaaciyay cid aan aheyn ciidanka dowladda inaysan hub Muqdisho ku dhexqaadan karin
Taliska Amisom ayaa shaaca ka qaaday in Magaalada Muqdisho aan lagu arki karin qof hub si sharcidaro ah ugu dhexwata Magaalada Muqdisho oo aan ka tirsaneyn ciidanka Dowladda Soomaaliya.
Rashka on May 22 2013 08:15:38 ·
Read More · 0 Comments · 879 Reads
· Guddiga Dowladda Kismaayo udirtay oo ka digay dagaalo ka dhaca Kismaayo
Guddiga Dowladda Soomaaliya ay udirtay Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose ayaa sheegay in dhismaha maamulka Jubbaland uusan xalaal aheyn gabi ahaantiisa.
Rashka on May 22 2013 08:08:10 ·
Read More · 0 Comments · 1222 Reads
· Xildhibaano badan oo sheegay inaysan ka noqon doonin mooshinka, kuna gacan seeray Madaxweynaha
Xildhibaano fara badan oo ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya, ee mooshinka ka keenay Xukuumada ayaa waxay sheegeen inaysan ka noqon doonin mooshinka.
Laacib on May 21 2013 22:33:31 ·
Read More · 0 Comments · 2897 Reads
· Dowladda oo Maamul u sameysay Degmada Buur Hakaba, markii ugu horeysay
Tan iyo markii 27-kii bishii Febraayo ee sanadkaan gacan ku heynta Degmada Buur Hakaba ee Gobolka Baay, ay Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom kala wareegeen Ururka Al Shabaab, ayay Dowladda u soo dhistay Maamul.
Laacib on May 21 2013 22:10:51 ·
· Page 1 of 770: 1234...770